Go'aanka maxkamadda sare Somaliland - BBC News Somali
Go'aanka maxkamadda sare Somaliland
23 Luulyo 2015
Maxkamada sare Somaliland ayaa maanta qaraar ka soo saartay dacwad ay shalay u gudbiyeen labada xisbi ee mucaaridka ee Wadani iyo Ucid.
Waxay labada xisbi ka cabanayaan in wasaaradda arimaha gudahu iska hortaagtay shirweyne ay mucaaridku hore ugu baaqeen inay kaga tashanayaan wax ay ugu yeedheen badbaadinta dimuqraadiyada Somaliland, kaddib bay yidhaahdeen markii madaxweynaha oo xilligiisii la doortay ku egyahay uu ka warwareegayo inuu cayimo maalinta doorashada.
Gudoomiyaha maxkamada sare Adam Xaaji Cali Axmed ayaa ku dhawaaqay qaraarka maxkamada sare iyagoo fadhiyay hogaamiyaasha labada xisbi mucaarid iyo masuuliyiinta arimaha gudaha iyo bollisku.
Qaraarka maxkamada oo kakooban afar qodob ayaa dhigaya in asxaabta mucaaridka ee waddani iyo Ucid ay xaq u leeyihiin inay qabsadaan shirar, waxaa kaloo maxkamadu go'aamisay in ay xaaraan tahay in cid aan ahayn golayaasha qaranku ku baaqdo shir qaran, waxayna maxkamadu amartay in muranka siyaasiga ah oo salkiisu yahay qabashada doorashada soo socota, in dhammaanba dhinacyada siyaasada iyo hay'adaha ay khuseyso ee distooriga ah, ay sida ugu dhakhsaha badan u soo afjaraan muranka.
Qaraarkan ayey soo dhaweeyeen xukuumadda iyo xisbiyada mucaaridka.
Mucaaridku waxay ku eedeeyeen boliiska inay ciidan badan dhigeen xafiisyada mucaaridka, oo dadna xidheen laakiin wasiirka guduhu wuxuu sheegay in ciidanka laga qaaday hadda, dad xidhanina aanay jirin.